Liverpool Oo Dalab 26 Milyan Oo Ginni Ah Ka Gudbisay Ciyaaryahanka Khadka...
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay dalab 26 milyan oo ginni ah ka gudbisay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Roma Lorenzo Pellegrini iyagoo raadinaya bedelka Georginio Wijnaldum .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Talyaaniga ayaa loo maleynayaa inuu noqday dooqa Jurgen Klopp kaasi oo boos ka heli kara Kooxda.
Pellegrini ayaa dhaliyay 11 gool wuxuuna dhigay sagaal kale oo Roma ah tartammada oo dhan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, oo ay ku jiraan gool iyo labo caawin kulankii semi-finalka Europa League ee Manchester United.
Iyadoo hal sano ay uga hartay qandaraaskiisa, waxaa la soo jeediyay in Roma lagu qasbi doono inay iska iibiso 24 jirkaan xagaagan.
Corriere dello Sport ayaa soo jeedineysa in Liverpool ay tahay kooxdii ugu horeysay ee tijaabisa go’aanka Giallorossi iyadoo ku dalbaneysa dalab xushmad leh.
Si kastaba ha noqotee, kooxda ka ciyaarta Serie A, oo haatan uu maamulo Jose Mourinho , ayaa la filayaa inay dalabkaasi aqbasho.
Related Topics:CiyaaryahankadalabGinnigool24 net wararka ciyaarahagool24net wararka ciyaarahagoolfmgudbisaykhadkaLiverpoolmilyanwararka ciyaaraha somalilandWararka Maanta
Wararka Maanta : Atletico Madrid Oo Mancester City U Bandhigtay Qaabka Ay Ku Heli Karto Saul...
Wararka Maanta : Cabdikariin Axmed Mooge oo loo doortay duqa Hargeysa - Wararka Maanta...
Wararka Maanta : Arsenal Oo Dalabkeedii Labaad Ka Gudbisay Joaquin Correa
Wararka Maanta : Croatia Oo Bar-baro Ay Galeen Czech Republic Ugu Soo Baxay Wareega 16-ka...
Wararka Maanta : Kheyre oo wajahaya cadaadis xooggan iyo eedeymo saameyn kara rajadiisa...
Wararka Maanta : Arsenal Oo Hogaamineysa Loolanka Loogu Jiro Ciyaaryahanka Khadka Dhexe Ee...
Wararka Maanta : Xulka Hungary Oo Bar-baro Ku Qabtay Dhigiisa France Euro 2020 Ee Guruubka...
Wararka Somali1 min ago
Warka Caalamka4 mins ago